ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ ရိုမဲရိုး တို့ကို ဘာကြောင့် အသင်း ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် မပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဆိုးလ်ရှား - SPORTS MYANMAR
ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ ရိုမဲရိုး တို့ကို ဘာကြောင့် အသင်း ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် မပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ မနေ့ က ကာရာဘောင်း ဖလား Round3ပွဲစဉ် အဖြစ် လိဂ်ဝမ်း ကလပ် ရော့ခ်ျဒေလ် အသင်း နဲ့ ကစား ခဲ့ ရပြီး ပွဲချိန် မိနစ် 90 အတွင်း တစ်ဖက် တစ်ဂိုး စီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် တာကြောင့် ပင်နယ်တီ အဆုံး အဖြတ် ခံယူ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ကန်ချိန် မှာတော့ ယူနိုက်တက် နံပါတ် တစ် ဂိုး သမား ဖြစ်သူ ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုး က အသင်း အတွက် ပင်နယ်တီ တစ်ကြိမ် ကာကွယ် ခဲ့ သလို ယူနိုက်တက် အသင်းသား တွေလည်း ပင်နယ်တီ5ကြိမ်လုံး ကို ဂိုး အဖြစ် ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ ကြတာ ကြောင့်5–3ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ နောက် တစ်ဆင့် တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေ အတွက် အထူး ပြောစရာ ဖြစ် ခဲ့တဲ့ အရာ တွေက အသင်း ရဲ့ တိုးတက် မလာ တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ၊ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေရဲ့ အဆုံးအသတ် ညံ့ဖျင်း မှုတွေ အကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ ဝေဖန် မှု ကတော့ အခု ရာသီ မှ အသင်း ဆီ ရောက်ရှိ လာတဲ့ အကယ်ဒမီ ထွက် လူငယ် ကစားသမား လေးကို နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား မှ ဒီ ပွဲစဉ် အတွက် အသင်း ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် ပေးအပ် ခဲ့ခြင်း အကြောင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အဆိုပါ ပွဲစဉ် အတွင်း ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ စီနီယာ ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုး ၊ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ ဖီးလ် ဂျုံးစ် ၊ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် နဲ့ မားကို့စ် ရိုဟို တို့ဟာ ပွဲထွက် ကစားသမား အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ကြ တဲ့ အတွက် သူတို့ ထဲက တစ်ဦးဦး ( အထူး သဖြင့် ပေါ့ဂ်ဘာ ) အသင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပါဝင် ရ လိမ့်မယ် လို့ ပရိသတ် တွေ တွက်ဆ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အခုတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား က ပေါဂ်ဘာ ၊ ရိုမဲရိုး တို့ကို ကျော်ပြီး အတွေ့ အကြုံ နည်းပါး တဲ့ တွမ်ဇီဘီ ကို ဘာကြောင့် အသင်း ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် ပေးခဲ့ ရလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အေဇဲလ် ( တွမ်ဇီဘီ ) ဟာ အသိအမှတ် ပြုသင့် ပြုထိုက် တဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ပါ ။ သူဟာ ဦးဆောင် နိုင်သူ တစ်ဦး ပါပဲ ။ ဒါ့ကြောင့် လူငယ် ကစားသမား လေးကို ဘာ့ကြောင့် အခွင့် အရေး မပေးနိုင် ရမှာလဲ ? ”
” ကျွန်တော် တို့ ဒီ လက်ပတ် ကို ဆာဂျီယို ( ရိုမဲရိုး ) ဆီ ပေးနိုင် သလို ပေါလ် ( ပေါ့ဂ်ဘာ ) ကိုလည်း ပေးလို့ ရတယ် ဆိုတာ သိရှိ ထားကြ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ပြသနာ မဟုတ် ပါဘူး ။ သူတို့ တွေက ဟို အရင် တုန်းက လည်း အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့ ဖူးကြ တယ်လေ ”
” ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ကတော့ အေဇဲလ် အတွက် ပါ ။ သူ ဒါကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် မလဲ ပေါ့ ။ သူဟာ တစ်ကယ့် ကို အဆင် ပြေခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် ပတ်ခဲ့ ရတာ ကို ပျော်ရွှင် ခံစား နိုင်ခဲ့တယ် ”
” အခုလို ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် ပေးရခြင်း ရဲ့ နောက်ထပ် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခု က ကျွန်တော် တို့ သူ့ အပေါ် ယုံကြည် မှု ရှိတယ် ဆိုတာ ပြသ လိုက်ခြင်း ပါပဲ ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ပရိသတ် တွေ သိလို ကြတဲ့ အကြောင်း အရာ ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ လာမယ့် ရက် သတ္တပါတ် အင်္ဂါ နေ့ နံနက် မှာ ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ်7အဖြစ် အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရဖို့ ရှိနေ ပြီး နောက် တစ်ပါတ် ကြာသပတေး နံနက် မှာတော့ ယူရို ပါလိဂ် ရဲ့ အုပ်စု ဒုတိယ ပွဲစဉ် အဖြစ် AZ အယ်လ်ခမာ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယ် ။
အဲ့တာ ပြီးရင် တော့ တနင်္ဂနွေ ည 10:00 အချိန် မှာ ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ် 8 အဖြစ် နယူးကာဆယ် အသင်း နဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင် ရဖို့ ရှိ နေတာ ကြောင့်6ရက် အတွင်း သုံးပွဲ အထိ ကစား သွား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယ် ။
ပေါ့ဂျဘာ ၊ ရိုမဲရိုး တို့ကို ဘာကွောငျ့ အသငျး ခေါငျးဆောငျ လကျပတျ မပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ #ဆိုးလျရှား
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ မနေ့ က ကာရာဘောငျး ဖလား Round3ပှဲစဉျ အဖွဈ လိဂျဝမျး ကလပျ ရော့ချြဒလျေ အသငျး နဲ့ ကစား ခဲ့ ရပွီး ပှဲခြိနျ မိနဈ 90 အတှငျး တဈဖကျ တဈဂိုး စီ သရေ ရလဒျ ထှကျပျေါ တာကွောငျ့ ပငျနယျတီ အဆုံး အဖွတျ ခံယူ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပငျနယျတီ အဆုံးအဖွတျ ကနျခြိနျ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ နံပါတျ တဈ ဂိုး သမား ဖွဈသူ ဆာဂြီယို ရိုမဲရိုး က အသငျး အတှကျ ပငျနယျတီ တဈကွိမျ ကာကှယျ ခဲ့ သလို ယူနိုကျတကျ အသငျးသား တှလေညျး ပငျနယျတီ5ကွိမျလုံး ကို ဂိုး အဖွဈ ပွောငျးလဲ နိုငျခဲ့ ကွတာ ကွောငျ့5–3ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ နောကျ တဈဆငျ့ တကျရောကျ နိုငျခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျ တှေ အတှကျ အထူး ပွောစရာ ဖွဈ ခဲ့တဲ့ အရာ တှကေ အသငျး ရဲ့ တိုးတကျ မလာ တဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ၊ တိုကျစဈ ကစားသမား တှရေဲ့ အဆုံးအသတျ ညံ့ဖငျြး မှုတှေ အကွောငျး ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ပှဲစဉျ မတိုငျမီ ဖွဈပျေါ ခဲ့တဲ့ ဝဖေနျ မှု ကတော့ အခု ရာသီ မှ အသငျး ဆီ ရောကျရှိ လာတဲ့ အကယျဒမီ ထှကျ လူငယျ ကစားသမား လေးကို နညျးပွ ဆိုးလျရှား မှ ဒီ ပှဲစဉျ အတှကျ အသငျး ခေါငျးဆောငျ လကျပတျ ပေးအပျ ခဲ့ခွငျး အကွောငျး ပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အထူးသဖွငျ့ အဆိုပါ ပှဲစဉျ အတှငျး ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ စီနီယာ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွ တဲ့ ဆာဂြီယို ရိုမဲရိုး ၊ ပေါလျ ပေါ့ဂျဘာ ၊ ဖီးလျ ဂြုံးဈ ၊ ဂကျြဆီ လငျဂတျ နဲ့ မားကို့ဈ ရိုဟို တို့ဟာ ပှဲထှကျ ကစားသမား အဖွဈ ပါဝငျ ခဲ့ကွ တဲ့ အတှကျ သူတို့ ထဲက တဈဦးဦး ( အထူး သဖွငျ့ ပေါ့ဂျဘာ ) အသငျး ခေါငျးဆောငျ အဖွဈ ပါဝငျ ရ လိမျ့မယျ လို့ ပရိသတျ တှေ တှကျဆ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
အခုတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား က ပေါဂျဘာ ၊ ရိုမဲရိုး တို့ကို ကြျောပွီး အတှေ့ အကွုံ နညျးပါး တဲ့ တှမျဇီဘီ ကို ဘာကွောငျ့ အသငျး ခေါငျးဆောငျ လကျပတျ ပေးခဲ့ ရလဲ ဆိုတာ ဖှငျ့ဟ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အဇေဲလျ ( တှမျဇီဘီ ) ဟာ အသိအမှတျ ပွုသငျ့ ပွုထိုကျ တဲ့ ခေါငျးဆောငျ တဈယောကျ ပါ ။ သူဟာ ဦးဆောငျ နိုငျသူ တဈဦး ပါပဲ ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူငယျ ကစားသမား လေးကို ဘာ့ကွောငျ့ အခှငျ့ အရေး မပေးနိုငျ ရမှာလဲ ? ”
” ကြှနျတျော တို့ ဒီ လကျပတျ ကို ဆာဂြီယို ( ရိုမဲရိုး ) ဆီ ပေးနိုငျ သလို ပေါလျ ( ပေါ့ဂျဘာ ) ကိုလညျး ပေးလို့ ရတယျ ဆိုတာ သိရှိ ထားကွ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ပွသနာ မဟုတျ ပါဘူး ။ သူတို့ တှကေ ဟို အရငျ တုနျးက လညျး အသငျး ခေါငျးဆောငျ ဖွဈခဲ့ ဖူးကွ တယျလေ ”
” ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ ကတော့ အဇေဲလျ အတှကျ ပါ ။ သူ ဒါကို ဘယျလို ကိုငျတှယျ မလဲ ပေါ့ ။ သူဟာ တဈကယျ့ ကို အဆငျ ပွခေဲ့ ပါတယျ ။ သူဟာ ခေါငျးဆောငျ လကျပတျ ပတျခဲ့ ရတာ ကို ပြျောရှငျ ခံစား နိုငျခဲ့တယျ ”
” အခုလို ခေါငျးဆောငျ လကျပတျ ပေးရခွငျး ရဲ့ နောကျထပျ ရညျရှယျခကျြ တဈခု က ကြှနျတျော တို့ သူ့ အပျေါ ယုံကွညျ မှု ရှိတယျ ဆိုတာ ပွသ လိုကျခွငျး ပါပဲ ” လို့ ဆိုးလျရှား က ပရိသတျ တှေ သိလို ကွတဲ့ အကွောငျး အရာ ကို ရှငျးလငျး ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ ဟာ လာမယျ့ ရကျ သတ်တပါတျ အင်ျဂါ နေ့ နံနကျ မှာ ပရီးမီးယား လိဂျ ပှဲစဉျ7အဖွဈ အာဆငျနယျ အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ရဖို့ ရှိနေ ပွီး နောကျ တဈပါတျ ကွာသပတေး နံနကျ မှာတော့ ယူရို ပါလိဂျ ရဲ့ အုပျစု ဒုတိယ ပှဲစဉျ အဖွဈ AZ အယျလျခမာ အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယျ ။
အဲ့တာ ပွီးရငျ တော့ တနင်ျဂနှေ ည 10:00 အခြိနျ မှာ ပရီးမီးယား လိဂျ ပှဲစဉျ 8 အဖွဈ နယူးကာဆယျ အသငျး နဲ့ ဆကျလကျ ရငျဆိုငျ ရဖို့ ရှိ နတော ကွောငျ့6ရကျ အတှငျး သုံးပှဲ အထိ ကစား သှား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယျ ။